जीवन सफल बनाउन चाहनुहुन्छ ? चाणक्यका यी नीति अपनाउनुहोस् - बडिमालिका खबर
जीवन सफल बनाउन चाहनुहुन्छ ? चाणक्यका यी नीति अपनाउनुहोस्
हरेक व्यक्ति आफ्नो जीवनमा सफल बन्न चाहन्छ । यसकालागि उसले ठुलाबडाको आर्सीवाद पनि लिन्छ । तर कैयौँ प्रयासका बाबजुद कतिपयले धोका पाउँछन् । यसबाट बच्न आचार्यको चाणक्य नीति हरेकका लागि उपयोगी हुन सक्छ ।
आचार्य चाणक्यको नीति पालन गरी साधारण व्यक्ति पनि जीवनका हरेक क्षेत्रमा सफलता पाउन सक्छ । साथै कसैको धोकाबाट बच्न समेत यसका लागि चाणक्य नीति लाभकारी हुन सक्छ । यसकालागि चाणक्यका निम्न नीती अपनाउन सकिन्छ ।
क) परिस्थितिको सामना गर्ने
कुनै काम थाल्दा त्यसमा बाधा आउनु स्वाभाविक हो । तर कतिपय बाधा आउन साथ आत्तिन्छन् । यस डरबाट बच्न चाणक्यले ती बाधाको डटेर सामना गर्न सुझाव दिएका छन् । परिस्थिति जस्तो भए पनि निर्भयका साथ ती बाधाको सामना गर्न चाणक्य सुझाउँछन् ।
ख) अर्काको गल्तीबाट सिक्ने
चाणक्य नीति अनुसार मानिसले अरूको गल्तीबाट सिक्नु पर्दछ । अर्काको गल्तीलाई पाठ बनाउन सके मानिस आफू पनि गल्ती गर्नबाट बच्छन् ।
ग) मेहनतका साथ रणनीति लगाउने
सफल हुन केवल मेहनत गरेर मात्र हुँदैन । यसकालागि मेहनतका अतिरिक्त उचित रणनीति लगाउन पनि आवश्यक हुन्छ । चाणक्य काममा मेहनत साथै रणनीति बनाएर अगाडी बढ्न सुझाउँछन् ।
घ) भूलमा सुधार
चाणक्य नीति अनुसार भूल मानिसको प्रकृति हो । यो जोबाट पनि हुन सक्छ । तर आफ्ना भूलबाट मानिसले पाठ सिकेर आगामी काममा ती भूल नदोहोराउने र सुधार गर्नु पर्दछ । यसले जीवनमा आउने हरेक काममा धोकामा कसरी अघि बढ्ने भने सिकाउँछ ।
ङ) काममा ऊर्जा लगाउने
कतिपय मानिस कामको थालनी गर्दा पुरै जोस, जाँगर र ऊर्जाका साथ गर्छन् । तर जसै केही समय बित्छ मानिसमा पहिले जस्तो काम प्रति ऊर्जा हुँदैन । त्यसैले चाणक्य काममा सदैव एकै प्रकारको ऊर्जाका साथ काम गर्न सुझाव दिन्छन् ।